Catégorie : Lesona 4 : Fanalahidin'ny firaisana
IVON-TOERAM-BAROTRA NANANA NY MAHA-IZY AZY TANY AZIA MINORA I EFESOSY. Nahitana mambra Jiosy sy Jentilisa, ary olona avy amin'ny sokajim-piaraha-monina maro ny fiangonana tany. Nanana olana ve izy ireo noho ny maha-avy amin'ny sokajim-piaraha-monina samy hafa azy? Tsia, tsy izany velively. Takatry ny mambra fa ao anatin'ny "tena" iray ihany izy ireo, dia i Jesosy izany, izay nampisy firaisan-tsaina tao amin'izy ireo.
Nizara roa ny nandraisan'i Paoly ny hevitry ny firaisana: ny firaisana teo anivon'ny fiangonana izay narnpitarnbatra ny Jiosy sy ny Jentilisa ho tena iray: Jesosy; ary ny firaisana eo anivon'ny zavaboary izay ahitan'ny voary rehetra any an-danitra sy ety an-tany ny firaisana ao amin'i Kristy.
Mampiasa ny teny hoe "ao amin'i Kristy" na "miaraka amin'i Kristy" imbetsaka i Paoly ao amin'ny epistily nosoratany mba hanehoana amintsika ny zava-drehetra nataon'Andriamanitra ho an'ny lanitra sy ny tany amin'ny alalan'ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny tanjon'Andriamanitra fara tampony tao amin'ny drafi-pamonjena dia ny hampikambana ny zava-drehetra amin'ny alalan'i Kristy. Izany firaisana izany dia tsy haseho amin'ny fahafenoany raha tsy amin'ny fiafaran'izao tontolo izao.
Fitahiana ao amin'i Kristy (Efes. 1:3-14)
Mitanisa fanomezana manokana marobe izay omen'Andriamanitra antsika noho ny amin'i Jesosy i Paoly ao amin'ny Efes. 1:3-14. Inona avy izany?
Manana antony maro tokony hisaorana an'Andriamanitra ireo mpanara-dia an'i Jesosy, satria noho ny Aminy dia manolotra fanomezana marobe ho antsika Izy. Iray amin'izany fanomezana izany ny fananganana anaka, izay ananganan'Andriamanitra antsika ho zanany. Mampiasa sary an'ohatra maro i Paoly hoenti-milaza ny fifandraisantsika vaovao amin'Andriamanitra ao Kristy. Amin'ireny sary maro ireny, ny fananganana anaka dia milaza ny lohahevitry ny lesona: ny firaisana. Efa natsangana ao amin'i Kristy isika, ary ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra. Maneho ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Isiraely izany sary maneho ny ankohonana izany.
Ao amin'ny tontolon-kevitry ny epistilin'i Paoly, ny Jentilisa izay manaiky an'i Jesosy ho Mesia dia zanak'Andriamanitra ihany koa, mpandova ny teny fikasana natao tamin'ny Isiraely (Rom. 8:17; Gal. 4:7). Zava-dehibe ho an'ny firaisan'ny Kristianina ny tombontsoa avy amin'ny fifandraisana amin'i Kristy sy ny maha-ao Aminy antsika. Milaza amintsika koa io andalana io fa efa fanirian'Andriamanitra hatry ny ela ny hampikambana ny taranak'olombelona rehetra ao amin'i Kristy. Ary, ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, isika rehetra dia zanak'Andriamanitra, samy tiany sy malalany.
Andeha hohazavaina ny ao amin'ny Efes. 1:3-14, izay tsy takatry ny olona sasany, teny fikasana izay voalazan'i Paoly hoe: "Nifidy antsika izy talohan'ny nanorenana izao tontolo izao, mba ho tafaray amin'i Kristy isika"- Efes. 1:4, (DIEM). Nanome toky ny hamonjy antsika Andriamanitra talohan'ny nanorenana izao tontolo izao. Midika ve izany fa efa nofidiny izay hovonjena sy izay ho very? Tsia, tsy mampianatra izany ny Baiboly. Izao no ambaran'i Paoly ao amin'io andininy io: nanao drafi-pamonjena ho antsika Andriamanitra talohan'ny nanorenany ny tany. Nataony izany satria iriny ny hahatonga ny rehetra ho voavonjy (Jao.3:16 vakio ihany koa ny 1 Tim. 2:6; 2 Pet. 3:9). Efa fantatr'Andriamanitra mialoha izay handray ny famonjena atolony, izany anefa tsy midika fa efa nanapa-kevitra mialoha ny amin'izay hovonjena sy ho very Izy. Atolotr'Andriamanitra ho an'ny rehetra ny famonjena satria efa maty ho antsika i Jesosy. Izao no fanontaniana mipetraka: Inona no havalintsika izany fanomezana izany? Tsy manery na iza na iza Andriamanitra handray ny fanomezany.
Nandrava ny rindrina mampisaraka (Efes. 2:11-22)
Antony mahatonga fisarahana indrindra eo amin'ny olona ny fihodirana sy ny fiaviana ary ny antokom-pivavahana. Any amin'ny fiarahamonina maro, ny kara-panondro dia ahitana ny foko na ny antokom-pivavahana misy ny olona tompony, ary matetika ireny fanavahana ireny no mifandraika amin'ny tombontsoa manokana na fandrarana izay tsy maintsy iainan'izany olona izany amin'ny fiainany andavanandro. Rehefa misy ady na fifandonana mitranga dia matetika ireny karatra ahitana ny maha-izy ny olona sy ny mampiavaka azy ireny no manjary miteraka fampijaliana na herisetra.
Miresaka momba ny fitondran-tena mendrika ho an'ny fiarahamonina kristianina i Paoly ao amin'ny Efes. 2:11-22. Inona izany? Inona no akon'ny firaisantsika ao amin'i Kristy eo amin'ny fahasamihafantsika? Inona no noravan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana?
Manasa ny Efesianina i Paoly mba hahatsiaro ny faharatsian'ny fiainany fony izy tsy mbola nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Nahatonga fifandirana sy ady teo amin'ny olona ny fahasamihafana teo arnin'ny fivavahana sy ny fiaviana; izao anefa no vaovao mahafaly: nampiraisin'i Jesosy ho olona iray ihany isika (Efes. 2:13).
Tamin'ny andron'i Paoly dia nisy toerana malalaka tao ivelan'ny tempoly tany Jerosalema, nantsoina hoe kianjan'ny tempoly izany. Nozaraina ho toerana roa io kianja io, ho an'ny Jiosy sy ny Jentilisa. Manakaiky ny tempoly ny kianja natokana ho an'ny Jiosy, izay nosarahina tamin'ny kianja ho an'ny Jentilisa tamin'ny alalan'ny rindrina anankiray. Ahitana soratra rnandrara ny vahiny tsy hiditra teo amin'izany rindrina izany. Raha manao izany mantsy izy ireo dia hatao maty. Nanome tsiny an'i Paoly ny Jiosy tany Jerosalema noho ny nandikany izany lalana izany. Nahazo tsiny izy noho ny nitondrany Jentilisa hiditra tao amin'ny faritry ny tempoly natokana ho an'ny Jiosy; i Trofimo avy any Efesosy izany lehilahy izany (Asa. 21:29). Araka izany dia nosamborina i Paoly. Izao anefa no nambarany tao amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Efesianina: "Fa Izy no fihavanantsika, izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana"- Efes. 2:14. Noho ny amin'i Jesosy, isika koa dia zanaka lahy sy zanaka vavin'i Abrahama izay afaka manornpo an'Andriamanitra.
Ahoana no hahatanteraka ny teny nataon'i Paoly ao amin'ny Efes. 2:11-22 amin'ny fiangonantsika? Inona ihany koa no tokony hataontsika mba hahatanteraka izany?
Firaisana ao amin'ny tena iray (Efes. 4:1-3)
Manome ohatra ho an'ny Efesianina i Paoly ny amin'ny fomba hampiharan'izy ireo ny torohevitra nomeny eo amin'ny fiainany andavanandro. Ny firaisana misy eo amin'ny Jiosy sy ny Jentilisa, eo amin'ny olona avy amin'ny kolontsaina sy fiaviana samy hafa dia thy anganongano na hevitra ao an-tsaina fotsiny ihany; tsy izany fa tena zava-misy izay mitaky antsika "mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo"- Efes. 4:1 izany.
Araka ny fanambaran'ny Efes. 4:1-3, toy ny ahoana no tokony handehanan'ny Kristianina ho mendrika ny fiantsoana azy ao Kristy?
Milaza amintsika i Paoly fa tokony halemy fanahy sy haneho fitiavana ary tsy hiavonavona isika mba hihavanantsika amin'ny hafa. " Hiezaka mafy hitana ny maha iray ny fanahy ao anatin'ny fihavanana, izay fatorana mampiray"- Efes. 4:3. Manatsara ny fihavanana ao amin'ny fiangonana sy amin'ny any ivelany izany. Rehefa mihavana isika dia maneho amin'ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka. Asain'Andriamanitra ho tonga vavolombelony ny fiangon.any, tiany raha mijoro ho vavolombelona ho Azy izy ireo na dia amin'ny fotoana manjombona indrindra aza.
Miresaka momba ny lohahevitra manan-danja ao amin'ny Efes 4:4-6 i Paoly. Inona izany?
Maneho ny faniriany lalina ny hisian'ny firaisana ao amin'ny fiangonana i Paoly ao amin'ireo andininy voalohany ao amin'io toko io. Atombony amin'ny fananarana ho amin'ny firaisana izany (Efes. 4:1-3) ary manaraka izany ny lisitrireo zavatra fito izay mampifandray ny mpino (Efes 4:4-6). Ny firaisana dia zavatra efa an.anan'ny mpino (Efes. 4:4-6) tsy maintsy kolokoloina amin'ny fotoana maharitra izany (Efes. 4:1-3), ary katsahina mandrakariva izay hampisy azy bebe kokoa any amin'ny hoavy (Efes. 4:13).
Nifidy antsika ho olony Andriamanitra. Inona no safidy azontsika atao mba handehanana "miendrika ny fiantsoana izay niantsoana" antsika?
Ny mpitarika ny fiangonana sy ny firaisana (Efes. 4:11)
"Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra."- Efes. 4:7. Eny tokoa, manolotra ny famonjena ho an'izay handray izany Andriamanitra, kanefa misy ireo fanomezam-pahasoavana izay omeny ho an'ny sasany amin'ireo mpan.ompony mba hanaovan'izy ireo asa lehibe ho Azy.
Miresaka momba ny fanomezam-pahasoavan'ny fitarihana izay nomen'Andriamanitra ny fiangonana i Paoly ao amin'ny Efes. 4:11. Inona avy ny anaran'izany fanomezana izany?
Ao amin'ny Efes. 4:12 dia milaza amintsika ny antony nanomezan'Andriamanitra ireny fanomezam-pahasoavanrny fitarihana ireny ho an'ny fiangonana i Paoly. Nahoana Andriamanitra no manome izany?
Ny Kristianina rehetra dia azo lazaina ho mpitandrina sy rnpanornpon'Andriamanitra sy ny filazantsara avokoa. Tsy ho an'ny mpitarika ny fiangonana ihany tsy akory ny baiko nomen'i Jesosy ao amin'ny Mat. 28:19,20 fa ho an'ny Kristianina rehetra. Nasainy manao ny firenena rehetra ho mpianatra izy ireo, manao batisa azy, ary mampianatra azy. Tsy ho an'ny olom-bitsy notsongaina, tahaka ny pasitora na/sy ny envanjelisitra ihany tsy akory ny asa fanompoana, fa natao ho an'izay rehetra mitondra ny anaran'i Kristy. Tian'Andriamanitra raha ny olon-drehetra no mizara ny filazantsara. Tsy misy mpitarika fiangonana afaka hilaza fa izy irery ihany no nomen'Andriamanitra ny asa. Antony manan-danja maro no nanomezan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavan'ny fitarihana ho an'ny fiangonana, tiany hampandroso ny fiangonana izany sy hampahafantatra azy ireo izay marina sy diso. Tokony hampiasain'ny mpitarika ny fiangonana izany fanomezana izany mba hampandroso bebe kokoa ny firaisana ao amin'ny fiangonana.
Ny lisitry ny fanomezam-pahasoavan'ny fitarihana notanisain'i Paoly dia milaza fa ireny anjara asa ireny dia natao hanampiana ny olon'Andriamanitra hanatratra ireo very. Nifidy olona maromaro tao amin'ny fiangonana Andriamanitra hanampy ireo mambra hafa hanao ny asany, hanompo an'i Jesosy, ary hampianatra sy hanandratra ny "tenan'i Kristy, dia ny fiangonana izany (Efes. 4:12). Nanome ohatra tonga lafatra ho antsika amin'ny fitarihana i Jesôsy, ohatra izay hitarika antsika eo amin'ny asa ataontsika ho an'Andriamanitra. Tonga mba hanompo ny hafa i Jesosy (Mat. 20:25-28). Tokony hanao araka izay nataony koa isika, tokony hiara-miasa amin'ny mpino hafa amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra.
Inona avy ny fanomezam-pahasoavana anananao? Ahoana no hampiasanao izany mba hisian'ny firaisana ao amin'ny fiangonana misy anao?
Fifandraisana eo amin'ny Kristianina (Efes. 5:15-21)
Tsy foto-kevitra sy fampianarana fotsiny ihany tsy akory ny fivavahana kristianina, fa miorina koa amin'ny fifandraisana: fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa. Tsy misy heviny ny filazana hoe rnanana fifandraisana ety amin'Andriamanitra kanefa tsy misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisan'ny tena amin'ny hafa. Tsy fiainana poak'aty ihany koa ny fivavahana kristianina. Azo ampiharina eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa koa ny foto-kevitra momba ny firaisana resahin'i Paoly ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Efesianina.
Vakio ny Efes. 5:15-21. Inona no asain'i Paoly ataontsika ao amin'ny and. 21? Inona no fifandraisana misy eo amin'ny fanetren-tena sy ny firaisana?
Asain'i Paoly mifanompo ny samy mpino, ampifandraisiny io and. 21 io sy ny fangatahany ny Kristianina mba "hofenoina ny Fanahy"- Efes. 5:18. Ahoana no hanehoantsika fa feno ny Fanahy Masina isika? Amin'ny alalan'ny fanompoana sy fifampihainoana. Tian'Andriamanitra raha tia sy manompo ny hafa isika. Mazava loatra fa tsy vitantsika amin'ny herintsika izany fa ilantsika ny fanampian'ny Fanahy Masina. Rehefa manompo ny hafa isika, dia maneho amin'izy ireo fa miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina ary manome antsika ny hery hanompoana azy ireo. Manampy antsika hanana firaisan-tsaina amin'ny hafa ny Fanahy Masina. Rehefa manompo ny hafa isika dia maneho ihany koa fa tena tiantsika i Jesosy satria maty noho ny otantsika Izy.
Resahin'i Paoly ao amin'ny Efes. 5:22; 6:9 ny fiantraikan'ny fanompoantsika ny hafa ao an-tokantrano sy any am-piasana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Inona no hery ananantsika ka mahatonga ny fiainan'izy ireo ho tsara kokoa?
Marina tokoa fa miankina amin'ny firaisan-tsaina ao an-tokantrano ny firaisana ao amin'ny fiangonana. Asongadin'i Paoly fa ny firaisana sy ny fitiavana ary ny fifanajana izay tokony hisy eo amin'ny mpivady dia tokony hanahaka ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana, fitiavana manolotra ny aina. Araka izany, ilaintsika ny maneho ny fitiavan'i Jesosy eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny zanatsika sy ny mpampiasa antsika ary ny mpiara-miasa amintsika rehetra. Tokony hameno ny fiainan'ny fiangonana ny fifandraisana tsara iainantsika ao an-tokantrano.
Inona no fitsipika manan-danja nianaranao avy amin'ireo andininy nodinihintsika anlo? Ahoana no hanampian'izany anao hitia sy hanompo ny olona ao amin'ny ankohonanao sy ny any amin'ny toeram-piasanao amin'ny fomba tsaratsara kokoa?
Vakio ny "The Spirit of Unity" nosoratan' Ellen G.White, tt. 179-188, ao amin'ny boky Testimonies for the church, b. 9.
"Tsy nanavaka na iza na iza noho ny amin'ny fiaviany, ny fahefany na ny antokom-pivavahany i Jesosy. Nirin'ny Fariseo sy ny mpanora-dalana ny hanao ny fanomezan'ny lanitra rehetra ho tombontsoam-pirenena manokana ka hanilika ny sisa amin'ny ankohonan'Andriamanitra izay any amin'izao tontolo izao. Tonga mba handrava ny rindrina mampisaraka rehetra anefa i Kristy. Tonga Izy mba haneho fa ny famindrampony sy ny fitiavany dia tsy voafetra, tahaka ny rivotra sy ny hazavana, na ny rotsaka orana izay mamelombelona ny tany. "Ny fiainan'i Kristy dia nametraka fivavahana izay tsy ahitana fanavahana saranga, fivavahana izay ifandraisan'ny Jiosy sy ny Jentilisa, ny andevo sy ny olona afaka amin'ny fatoram-pirahalahiana, mitovy eo anatrehan'Andriamanitra Tsy nisy hevitra ambadika nanosika Azy hanao ny asa rehetra nataony. Tsy nisy fahasamihafana ny nitondrany ny mpiray monina taminy sy ny vahiny, ny fahavalo sy ny sakaiza. Ny zavatra nanintona ny fony dia ny fanahy mangetaheta ny rano velona."- TFC, b. 9, tt. 190, 191.
1- Inona no hitanao ao amin'ny Efes. 4 izay maneho ny fihavanana sy ny firaisan-tsaina tian'Andriamanitra ananantsika ao amin'ny fiangonana? Inona no azontsika atao mba hahazoana antoka fa ananantsika izany?
2- Raha tiantsika ny hisian'ny firaisana eo anivon'ny fiangonana dia tokony hanaiky hanompo ny hafa isika.Raha tsy eo izany toe-tsain'ny fitiavana izany, dia tsy hisy mihitsy ny fihavanana sy ny firaisana ao amin'ny fiangonana. Raha miavonavona isika ka mihevitra fa manana ny marina mandrakariva, raha tsy to hihaino ny hafa koa dia tsy hahita izany fihavanana sy firaisana izany mihitsy. Ahoana no hianarantsika manompo ny hafa?